बदाम दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा हामीले सधै जाँडोको मौसममा खाने बदाम र अर्को सधै प्रयोग गरिने आलमन्ड बदाम । आलमन्ड बदामलाई ड्राइफ्रुटको राजा पनि भनिन्छ । हामीमध्ये कतिपयले यसलाई विशेष गरेर चाडपर्वका बेला बढी प्रयोग गर्ने गछौं । अझ भन्नु पर्दा तिहारमा यस्तो बदाम, काजु, ओखर लगायतका अन्य ड्राइफ्रुटको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने गरेको छ ।
विगतका दिनहरुमा चिल्लो चाप्लो विभिन्न प्रकारका रोटिहरुको बढी प्रयोग गरिएजस्तै पछिल्ला दिनमा किस्तीमा भरिएको ड्राइफ्रुट नै तिहारमा भाइ अथवा दाइलाई उपहार दिने प्रचलन समेत बढेको छ । तर, यस्ता ड्राइफ्रुटहरुको कसरी प्रयोग गर्ने त जसले तपाई हाम्रो स्वास्थ्यलाई भरपुर फाइदा मिलोस् । तीनै ड्राइफ्रुट मध्ये आज जानौ आलमन्ड बदाम कसरी खाने त ?
आलमन्ड बदाम केटाकेटी बृद्ध बृद्धा तथा सबै उमेरका व्यक्तिहरुले केही पिस हातमा लिएर खाने गर्दछौं । तर, यसलाई कसरी खाने र यसका फाइदा तथा बेफाइदा के हुन्छन् भन्ने कमलाई थाहा हुन्छ । त्यसो त आलमन्ड बदामलाई रातभर भिजाएर बिहान त्यसको बोक्रा निकालेर खान सुझाव दिन्छन् यस सम्बन्धीका स्वास्थ्य विज्ञहरु । उनीहरुका अनुसार एक दिनमा ५ देखि १० वटा मात्र बदाम खान सकिन्छ ।
स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार भिजाएको बदामलाई दिनहुँ सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई अत्यधिक फाइदा हुन्छ । भिजाएको बदाममा भिटामीन ई, जिंक, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, ओमेगा थ्री र फ्याटी एसिड पनि हुन्छ । बदाममा एन्टि अक्सिडेन्ट पनि हुने हुनाले त्यसलाई हामीलाई धेरै प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट पनि टाढा राख्दछ ।
भिजाएको बदामलाई बिहान, दिउँसो बेलुका कुनैपनि बेला सेवन गर्न सकिन्छ । तर, यसलाई बिहान खाली पेटमा खानु अति उत्तम हुने बताइन्छ । यदि तपाई मोटोपन कम गर्नका लागि डाइटमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई बिहानको ब्रेकफास्ट भन्दा पहिले खानु अति उत्तम मानिन्छ । यसमा फाइवरको मात्रा भरपुर हुनाले त्यसकारण पनि बिहान यसको सेवन गर्दा भोक चाँडै नलाग्ने र शरीरमा इनर्जी पनि बढिरहन्छ । यदि तपाई जिम गर्नुहुन्छ भने जिम गर्नुभन्दा ३० मिनेट पहिले यसको सेवन गर्न सुझाउछन् स्वास्थ्य विज्ञ ।
यदि तपाईलाई निद नलाग्ने समस्या छ भने यसमा भरपुर मात्रामा म्याग्नेशियम पाइने हुनाले तपाई रातको समयमा यसको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ । तर, धेरै राति यसको सेवन नगर्दा नै राम्रो हुनेछ ।
कसरी खाने त बदाम ?
केही मानिसहरु बदाम नभिजाई खाँदा बोक्रा सँगै खाँदा पनि हुने बताउँछन् भने केही मानिसहरु बदाम भिजाएर यसको बोक्रा निकालेर खाँदा स्वास्थ्यलाई अधिक फाइदा हुने बताउँछन् । बदामलाई रातभर पानीमा भिजाएर राख्ने र बिहान यसको बोक्रा निकालेर खाली पेटमा खाँदा भरपुर लाभ मिल्नेछ । त्यस्तै एक गीलास दूधमा पाँचवटा भिजाएको बदाम र २ वटा खजुर राखेर मिक्सरमा जुशजस्तै बनाएर खान सकिन्छ ।
यी हुन् बदाम खानुका फाइदा
त्यस्तै बिहान खाली पेटमा भिजाएको चना, केही किशमिश र बदाम मिसाएर खाँदा पनि अत्यन्तै फाइद हुने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् ।
भिजाइएको बदाममा भिटामीन इ को मात्रा भरपुर हुने हुनाले भिटामीन इ छालालाई स्वस्थ्य राख्नमा अत्यन्तै फाइदाजनक हुन्छ । यदि तपाई दिनहुँ भिजाएको बदाम सेवन गर्नुहुन्छ भने यसले छालामा नरमता र चमकता ल्याउँछ ।
-भिजाएको बदामले शरीरको पाचन शक्ति बढाउनमा पनि सहयोग गर्दछ । बदाममा अत्यधिक मात्रामा फाइबर हुने हुनाले पेटको पाचन क्रियालाई ठिक राख्नमा सहयोग गर्दछ ।
-त्यस्तै दिनहुँ भिजाएको बदाम खानाले कब्जियतको समस्या पनि समाधान हुने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । साथै यसले दिमागलाई ताजा र स्वस्थ्य बनाउन पनि सहयोग गर्दछ । यसमा रहेको ओमेगा थ्री फ्याटी एसिडले मश्तिष्कको शक्ति बढाउन सहयोग गर्दछ ।
-त्यस्तै यसको दिनहुँ सेवन गर्नाले शरीरमा चर्बि कम गर्न पनि सहयोग गर्दछ । यसमा रहेको मोनोअनस्याचुरेड फ्याटका कारण छिटो भोक नलाग्ने तथा शरीरमा शक्ति पनि बढीरहन्छ ।
– बदाम मोटोपन घटाउनका लागि पनि सहयोगी मानिन्छ । भिजाएको बदाममा प्रोटीन, पोटासियम र म्याग्नेशियम भरपुर मात्रामा हुने हुनाले यसले हृदय स्वास्थ्यमा पनि सहयोग गर्ने तथा हृदयघातको खतरा पनि कम हुने बताइन्छ ।
– बदाममा ओमेगा थ्री र ओमेगा सिक्स फ्याटी एसिड हुने हुनाले यसको सेवनले कपाललाई लामो, बलियो र मुलायम बनाउन पनि सहयोग गर्दछ । साथै कपाल झर्ने समस्या पनि कम हुने बताइन्छ ।
-त्यस्तै मधुमेह कन्ट्रोल गर्नका लागि पनि भिजाएको बदाम सहयोगी मानिन्छ । बदाममा पाइने म्याग्नेसियम स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै फाइदाजनक हुने र ब्लड सुगर लेवल पनि कन्ट्रोल गर्ने बताइन्छ ।
बदममा पाइने क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फस्फोरस जस्ता पोषकतत्वले हाम्रो शरीरका हड्डीहरु बलियो बनाउनमा सहयोगी मानिन्छ । त्यस्तै बदामसँगै दूध -पिउनाले शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा भरपुर हुन्छ । किनकी यी दुवै क्याल्सियमको राम्रो श्रोत रहेकाले हड्डि बलियो बनाउनका लागि फाइदाजनक हुने बताइन्छ ।
यी हुन् धेरै खाँदाका बेफाइदा
बदाममा फाइबरको मात्रा अत्यधिक हुने हुनाले धेरै मात्रामा खाँदा शरीरमा चाहिनेभन्दा बढी फाइबर जम्ने हुनाले पेट दुख्ने, कब्जियत लगायतका समस्या हुने र मिर्गौलामा पथ्थरीको समस्या हुनेलाई बदामको सेवन फाइदाजनक नहुने बताइन्छ । बदाममा अक्जिलेटको मात्रा बढी हुनाले पथ्थरीको समस्यालाई अझ बढाउने बताइँन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले बदाम सेवन नगर्नु नै राम्रो हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । एजेन्सीको सहयोगमा
कोरोना संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा थप ८ को मृत्यु, ५१९ संक्रमित
१६ साउन, पोखरा । कोरोना संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा शनिवार ८…
स्याङ्जा कांग्रेसमा दश हजार बढी क्रियाशील सदस्य थपिए, हेर्नुहोस् कहाँ कति थपिए त ?
१६ साउन, वालिङ । स्याङ्जामा नेपाली कांग्रेसका दश हजार नयाँ…
आज यी पाँच प्रदेशको केही भू–भागमा भारी वर्षाको सम्भावना
निजी क्षेत्रले पनि खोप खरिद गर्न पाउने
असोजसम्म एक करोड ८३ लाख ८२ हजार खोप ल्याइने, कहाँकहाँबाट ल्याँदैछ त खोप ?